Kroaty Maslina Resort nanambara mpitantana Hotely vaovao
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Kroaty Maslina Resort nanambara mpitantana Hotely vaovao
Jolay 21, 2020
Maslina Resort, fananana vaovao Relais & Chateaux vaovao misy fahasalamana hatrany, fanokafana ny volana aogositra 2020 dia faly nanambara fa voatendry ho talen'ny hotely Andriamatoa Giuseppe Nardiello.
Nanomboka ny asany tamin'ny sehatry ny fandraisana vahiny Andriamatoa Nardiello tamin'ny faha-15 taonany ary nahavita ny fianarany fitantanana hotely tany Sorrento, Italia. Nandritra ny fotoana naha-nampiantrano azy tamim-pahaiza-mandray vahiny, Andriamatoa Nardiello dia nitana andraikitra ambony amin'ny fitantanan-draharaha ambony amin'ny trano fandraisam-bahiny marobe ary nahazo traikefa iraisam-pirenena tany London, Italia, Alemana, France ary Kroasia. Niasa tamina marika hotely iraisam-pirenena maro izy, anisan'izany i Hilton sy Le Meridien. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Maslina Resort, Andriamatoa Nardiello dia nitana ny toeran'ny talen'ny Division Division tao amin'ny DoubleTree avy amin'i Hilton, Venice, Italia.
Andriamatoa Nardiello dia nampiseho fahaiza-mitarika mahomby sy fitantanana mahomby amin'ny andraikitra notananany teo aloha izay ahitana ny fitantanana ny birao anoloana, ny fitantanana ny fizarana efitrano ary herintaona amin'ny maha mpitantana mponina ao amin'ny Lafodia Sea Resort any Lopud, Kroasia. Miaraka amin'ny asany efa niasa hatry ny ela tao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ary ny fahalalana be dia be ny haitraitra sy marika malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, Andriamatoa Nardiello dia hitondra traikefa manan-karena amin'ny Maslina Resort.
“Manantena fatratra ny anjara andraikitro amin'ny maha Mpitantana Hotel ao amin'ny Maslina Resort ahy aho. Fotoana tena nanahirana tokoa ho an'ny indostrian'ny fampiantranoana. Ny votoatin'ny Maslina Resort dia ny fahasalamana ary faly aho fa anisan'ny ekipa mahafinaritra toy izany. Manomboka amin'ny ekipa marina sy ny olona mety izany rehetra izany. Ny olona no fototry ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ary nifantina ekipa iray mazoto izahay, mafana fo sy sariaka. Manantena fatratra ny fandraisana ireo vahininay voalohany aho amin'ny volana aogositra ary ho anisan'ny hevitra tsy manam-paharoa sy manaitaitra toy izany. ” Enthuses Andriamatoa Giuseppe Nardiello, talen'ny Hotel an'ny Maslina Resort.
Ilay Maslina Resort misy kintana dimy mahafinaritra any amin'ny nosy Kroaty Hvar dia eo akaikin'ny iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra amin'ny Eastern Adriatic, Stari Grad. Fananana Relais & Chateaux, Maslina Resort hisokatra amin'ny Maslinica Bay amin'ny volana aogositra 2020.
Ny hoavin'ny hotely Sakafo sy zava-pisotro - apetraho COVID-19
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny, mihozongozona noho ny fahasimban'ny toekarena COVID-19, dia miantso vonjy